China TDSN Twin Screw Extruder Gearbox ifektri abakhiqizi | Nanjing Zhitian
Ibhokisi legiya (kufaka phakathi umzimba ophakathi, uhlelo lwangaphandle lwamafutha), ukucaciswa komkhiqizo, isethi yolayini kawoyela.
--- Ijubane eliphezulu.
--- I-Triaxiality design efanayo ithuthukisa umthamo wokuthwala we-axis B.
- Ukwenziwa okulula futhi okulula kwe-assemply.Thola izindleko.
Ukuhlelwa kwesakhiwo se-Modular kufinyelela izinhlobo ezimbili zebanga le-gearbox torque grade.
Ibhokisi likabhokisi le-extruder
Isingeniso se-TDSN Twin Screw Extruder Gearbox
Amagiya enziwe ngensimbi ye-carburizing yensimbi ephezulu esezingeni eliphezulu ngokugaya nokuqeda amazinyo, lapho zonke izinqubo zokugaya igiya ziqedwa yimishini yokugaya igiya engenisiwe. Amapharamitha weGiya alungiselelwe futhi enzelwe ngokukhethekile izici zewele isikulufa extruder, anciphisa ukugxila kokucindezela empandeni yegiya nokwenza ngcono izimo zegiya. Sithuthukise ukushuba kwegiya lokukhathala okuguqukayo, amandla okukhathala kanye nobubanzi bobubanzi obubanzi. Siphinde samukela umbono wokuqamba wakamuva kanye nobuchwepheshe bokushisa ukwelashwa kwesakhiwo samagiya, ngaleyo ndlela saqinisekisa amagiya kusuka ekufaneni kokunemba namandla.
TDSN Amandla wegearbox netafula leTorque
I-RPM (r / min)
Ibanga leTorque (T / A3)
Khetha ikhwalithi ephezulu nobulukhuni bezinto zensimbi ze-ductile.
Mang amasethi imishini machining anolaka, ezifana Gantry-uhlobo Milling, sokuprakthiza osabalalayo, njll Kwenziwa kabusha isimo blank kanye imbobo yangaphakathi maching anolaka.
Amasethi amaningi wokuqedela imishini, njenge-CNC Grinding Machine, i-NC Boring Machine, njll Ukuqhubeka kokusebenza kwenqubo ngayinye yokusebenza, ukunemba kuphakeme, wena kuphela.
Ukuhlolwa kwebhokisi lamagiya
Imishini nezinsimbi zokuhlola ezisezingeni eliphakeme, iqembu lokuhlola elinezinqubo, ukuma kwebhokisi lamagiya, ibanga eliphakathi nendawo, imbobo yangaphakathi kanye nenqubo elandelayo, ngemuva kokuhlolwa nokulungiswa.
Umhlangano oqinile neqembu le-R & D, izingxenye zizohlanganiswa ngokusho komdwebo, isinyathelo ngesinyathelo ukucwaningwa kwamabhuku, ngokuhlola ukuhlolwa ngemuva kokuphela komkhiqizo.
Thekelisa ukupakisha okujwayelekile, ukupakisha, sebenzisa ezansi kwepuleti elungisiwe, qinisekisa ukuthi i-peoduct ayishintshi ekuhambeni.
Langaphambilini I-STD Twin Screw Extruder Gearbox
Olandelayo: I-Twin screw ne-Compound Alloy Liner Barrel
Ibhokisi legiya le-Extruder
Ibhokisi legiya le-Twin Screw Extruder
Ibhokisi legiya le-Twin Parallel Screw Extruder
Intulo Ukulungiswa Kwemigqomo Emidala Ushintsho Olusha ...
Imiphongolo YeTwin Screw Extruder, Ingxenye Yesikulufa ye-Tex65aii, Umgqomo Wepulasitiki Wepulasitiki, Isikulufa Umgqomo Wokuqothula, WR15E Shaft, I-Double-Screw Extruder,